Induction Ukutshisa iityhubhu zensimbi-HLQ umatshini wokutshisa ubushushu
Ukuxhoma ukutshisa iityhubhu zentsimbi ezinobubanzi obuyi-14mm, 16mm, kunye no-42mm (0.55 ”, 0.63”, no-1.65 ”). Ubude obungama-50mm (2 ″) betyhubhu buba shushu kakhulu buye kwi-900 ° C (1650 ° F) kwimizuzwana engaphantsi kwe-30.
I-DW-UHF-6KW-III heater henduction ephathwayo
• Iityhubhu zentsimbi ezine-OD: 14mm, 16mm kunye ne-42mm (0.55 ”, 0.63”, kunye no-1.65 ”)
Ubukhulu bodonga: 1mm, 2mm, kunye 2mm (0.04 ″, 0.08 ″, 0.08 ″)
Amandla: 5 kW ityhubhu eyi-42mm, 3 kW nge-14 kunye ne-16 mm iityhubhu
Ubushushu: I-1740 ° F (950 ° C)
Ixesha: 26 sec.
Faka ityhubhu yentsimbi kwikhoyili.
Faka ubushushu bokungeniswa kwimizuzwana engama-26.
Susa ityhubhu kwikhoyili.
Ubushushu obunqwenelekayo bokufudumeza kufezekisiwe kwimizuzwana engaphantsi kwe-30 kwiityhubhu ezintathu zentsimbi ezahlukeneyo. Inkqubo yethu yokungenisa i-5 kW inokusetyenziselwa ukucwenga ngempumelelo iityhubhu zentsimbi ezinobubanzi obahlukeneyo kunye nobukhulu.
iindidi Teknoloji tags Thenga i-preheater yoqheliso, Ukufudumeza kwangaphambili, Ixabiso lokungeniswa kwangaphambili, ukuqulunqa ukutshiza, ukutyunjwa komshini wokucoca, yokuqulunqa inkqubo, induction preheating iityhubhu, preheating intsimbi, ukutshisa iibhubhu, iityhubhu zentsimbi Post yokukhangela